KMS 2021 — Kônferansa Momba ny Soratra 2021
Kônferansa andiany fahefatra
Kônferansa Momba ny Soratra 2021
6 Novambra, Antananarivo, Madagasikara Hividy Tapakila
Misokatra izao ny fandraisana lohahevitra sy lahatsoratra ho an'ireo maniry hanao velakevitra amin'ny KMS 2021. Azonao jerena ao amin'ny pejy natokana ho amin'izany ireo fitsipika sy daty tokony ho tadidiana mikasika ny fandefasana lahatsoratra.
Daty farany fandefasana lohahevitra sy famintinana: 30 Mey.
Hapetraka eto ny mombamomba ny Mpiteny 1.
Araho Mpiteny 1 —
Hapetraka eto ny mombamomba ny Mpiteny 2.
Araho Mpiteny 2 —
Hapetraka eto ny mombamomba ny Mpiteny 3.
Araho Mpiteny 3 —
Hapetraka eto ny mombamomba ny Mpiteny 4.
Araho Mpiteny 4 —
Hapetraka eto ny mombamomba ny Mpiteny 5.
Araho Mpiteny 5 —
Ny handrindra ny kôferansa amin'ity andiany fahefaatra ity dia Ravorombato Ony Lantoarimamy.
Ravorombato Ony Lantoarimamy na Ravorombato dia Mpanoratra, Mpampianatra, Mpikabary. Filohan'ny Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo. Manana ny mari-boninahitra Chevalier de l¡¯ordre des arts, des lettres et de la culture.
Araho Ravorombato —
Mandritra ny iray andro no anaovana ny kônferansa. Manomboka amin'ny 7:30 maraina ny fotoana ary mifarana amin'ny 5 ora hariva.
Amin'ny 30 Oktôbra no hivoaka ny antsipirian'ny fandaharam-potoana.
Resadresaka momba ny soratra sy ny fanoratana
Teny fisaorana - Famaranana
Ireto daholo ny mpanohana sy mpiara-miasa amin'ny KHT amin'ny fanatontosana ny KMS 2021. Ankoatr'ireo dia maro dia maro ireo olon-tsotra sy fikambanana izay tsy mitonona anarana manohana sy miara-miasa aminay.